दुर्गा प्रसाइँको व्यापक खोजीः फरार प्रसाइँ अघिअघि, प्रहरी पछिपछि - TodayKhabar
दुर्गा प्रसाइँको व्यापक खोजीः फरार प्रसाइँ अघिअघि, प्रहरी पछिपछि
काठमाडौं, ४ माघ । विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालित भएको छ । तर, उनी भने फरार रहेको बुझिएको छ । झापास्थित् बि एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईं आफ्नो बोलीको कारण आफैं विवादित बनेका छन् । उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि प्रहरी प्रशासनले उनलाई यतिवेला खोजिरहेको छ ।
उनीमाथि अदालतमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले मुद्दा दर्ता गरेका थिए । प्रहरीलाई पक्राउको अनुमति प्राप्त भइसकेको छ । प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ । तर, प्रसाईं मोबाइल बन्द गरेर गायब भएका छन् । कतिसम्म भने प्रसाई अहिले फरार छन् ।
प्रसाईले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीमाथि गम्भीर आरोप लगाए । २० करोड घुस मागेको भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत नाम मुछे । प्रसाईंले आफूमाथि घुस लिएको आरोप लगाएपछि गिरी त्यसविरुद्ध अदालत पुगे । प्रसाईंको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उनी विवादमा आइरहेपनि पछिल्लोपटक उनी प्रहरीको खोजीमै पर्नु अर्थपूर्ण छ । यसले उनी शक्तिकेन्द्रबाट समेत टाढिएको देखिदैछ ।
झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि प्रसाईं निकै सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनले मेडिकल माफियाविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले गरेको आन्दोलनको कडा आलोचना गर्दथे । यसकारण पनि उनी विवादमा पर्थे । पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीविरुद्ध खनिए । गिरीले द्धारिका होटलमा भेट्दा घुस मागेको आरोप लगाए । यसले दुवैबीच विवाद बढ्यो । एक अर्का्विरुद्ध उजूरी र मुद्दा हाले । प्रसाईंमाथि भने प्रहरीले अनुसन्धान बढाएको छ ।
पत्रकारले जाँच दिने व्यवस्था हटाइन्छः संचारमन्त्री
पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको घरमा प्रेसर बम विस्फोट